Sidee Khilaafka siyaasadda u sameeyay amniga Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Soomaaliya waxay ka taagan wado isgoys ah, waxaa jira qalalaase siyaasadeed, oo ka dhashay doorashooyinka oo muddo dheer dib u dhac ku yimid iyo go’aankii Farmaajo ee ahaa inuu xafiiska sii joogo kadib markii uu waqtigiisa dhamaaday sanadkii hore.
Is-qab-qabsiga ka jira Muqdisho, ee u dhaxeeya Rooble iyo Farmaajo waxay sababtay xasilooni darro ka dhalatay xaalad siyaasadeed iyo inuu faraha ka baxo amni oo awalba jilicsanaa.
Al Shabaab – Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa gacanta ku haysa inta badan dhulka Soomaaliya, waxayna si joogto ah weeraro uga fulisaa Muqdisho iyo meelaha kale ee dowladda maamusho, iyadoo sidoo kale ku dhex-milantay hay'adaha dowladda, gaar ahaan kuwa amniga.
Marka ay siyaasadda xumaato, waxaa xumaada amniga - waa labo isku xiran dalka Soomaaliya. Loolanka dhanka awoodda ee Farmaajo iyo Rooble wuxuu intiisa badan salka ku hayaa maamulka Ciidamada iyo doorashadda dalka, oo noqotay sanadkan mid musuq-maasuq iyo boob hareeyay.
Dagaallo ayaa durbadiiba ka qarxay meelo kala duwan, oo Beledweyne ay kamid tahay, waxayna salka ku haysaa waxa ka socda Muqdisho, iyadoo Farmaajo lagu eedeeyay hurinta colaadda sokeeye ee dalka, si doorashadda looga mashquullo, isna kursiga ugu sii fadhiyo.
Militeriga iyo hay'adda Nabad Sugida ee NISA waxay hoostagaan Farmaajo, oo taliyeyaashooda isaga daacad u ah, waxaana taasi ka dhigaysaa Rooble qof awoodiisu yartahay, oo hadalkiisa ficil u bedeli karin, maadaama dhinac walba ka joogaan kuwa daacad u ah Madaxweynaha waqtigiisu dhamaadey.
Dowladda waxay mar hore joojiysay dagaalkii Al-Shabaab, waxayna tani siiyay Kooxda fursad ay isku soo abaabusho, oo ku fulin karto weeraro. Waxay Ciidanka AMISOM ka jiraan maalmahoodii ugu dambeeyay joogitaanka Soomaaliya, iyadoo u dhiman saddex bilood oo dhawaan loogu darey, si ay isku diyaariyaan bixitaanka.
Al-Shabaab waxay dhawaan qabsatay Balcad, oo Muqdisho 30-KM waqooyi uga beegan, si ay u muujiso awoodeeda inay tagi karta meel walba, iyadoo Caasimadda khatar galayso hadii Ciidanka AMISOM ka baxaan wadanka, oo aan u diyaarsanayn Ciidan qaran, oo mideysan.